तौल घटाउन सहयोग गर्ने घरमा गरिने यी ४ काम – जीवनशैली
तौल घटाउन सहयोग गर्ने घरमा गरिने यी ४ काम
Home /टिप्स एण्ड ट्रिक्स/तौल घटाउन सहयोग गर्ने घरमा गरिने यी ४ काम
कैयौं अनुसन्धानले दैनिक २ घण्टा घरको काम गर्नाले सजिलै क्यालोरी घटाउन सकिने कुरा प्रमाणित गरेका छन् । घरमा काम गर्दा फिट हुने भएपछि जिमको पैसा पनि बच्ने भयो । चार काम जसले सहजै तौल घटाउन सहयोग गर्छः
१. झाडु वा पुछा लगाउनु
दैनिक झाडु र पुछा लगाउनाले ३०० देखि ३५० क्यालोरी बर्न हुन्छ । यसले हात बलियो हुनुको साथै शरीरका अङ्ग पनि बलिया हुन्छन् । पुछा लगाउँदा घरिघरि झुक्ने हुनाले पेट र तिघ्रामा पनि असर पर्छ, यसले फिट हुन सहयोग गर्छ ।
२. माली काम
माली काम गर्दा मांसपेशीको कार्यक्षमतामा बृद्धी हुन्छ । यसले जोर्नीमा लचिलोपना आउँछ । यदि दैनिक आधा घण्टा बगैचामा पानी हाल्ने वा गोडमेल गर्ने काम गर्नाले पेट, हात र कम्मरमा दवाव पर्छ । यसले लगभग ४०० क्यालोरी बर्न हुन्छ ।
३. बाथरुमको सरसफाई
यो काम गर्दा खुट्टा (पैताला), पेट वा कम्मरको वरिपरिको मांशपेशीले काम गर्छ । साथै हात वा काँधलाई बलियो बनाउने गर्छ । यो काम गर्नाले करिब २०० क्यालोरी बर्न हुन्छ ।
४. कपडा धुनु
वासिङ मेसिनमा कपडा धुनुभन्दा हातले कपडा धुनाले शरीरलाई फाइदा हुन्छ । कपडा धुँदा शरीरको सम्पूर्ण अङ्गको एक्सरसाइज हुन्छ । एक घण्टा कपडा धुँदा लगभग १३० देखि १५० क्यालोरी बर्न हुन जान्छ । यसले शरीरलाई फिट राख्न मद्दत गर्दछ ।
विदेशी आकाशमा नेपाली ‘परी’
ड्रग्स लिएको आरोपमा इंग्ल्याण्डका यी क्रिकेटरलाई ३ साता प्रतिबन्ध